Amanqaku kaTim Beveridge Martech Zone
Amanqaku ngu UTim Beveridge
Ukujolisa kumxholo: Impendulo kuMmandla oKhuselekileyo weNtengiso yeBrand?
NgoLwesihlanu, Novemba 13, 2020 NgoLwesihlanu, Novemba 13, 2020 UTim Beveridge
Ukunyuka kwenkxalabo yabucala okwandileyo, kudityaniswa nokusweleka kwecookie, kuthetha ukuba abathengisi ngoku kufuneka bahambise imikhankaso eyenzelwe ubuqu, ngexesha lokwenyani nangokwezinga. Okubaluleke ngakumbi, kufuneka babonakalise uvelwano kwaye babonise imiyalezo yabo kwindawo ekhuselekileyo. Kulapho amandla okujolisa kwimeko asebenza khona. Ukujolisa kumxholo yindlela yokujolisa kubaphulaphuli abafanelekileyo usebenzisa amagama aphambili kunye nezihloko ezivela kumxholo ojikeleze uluhlu lweentengiso, ezingafuni kuki okanye enye
Siphila kutshintsho lweparadigm yehlabathi, apho iinkxalabo zabucala, kunye nokusweleka kwecookie, kubeka uxinzelelo kubathengisi ukuba bahambise imikhankaso yabantu kunye novelwano, kwiindawo ezikhuselekileyo zorhwebo. Ngelixa oku kuzisa imiceli mngeni emininzi, kukwabonisa amathuba amaninzi kubathengisi ukuba bavule amaqhinga ajolise ngakumbi ekujongeni umxholo. Ukulungiselela i-Cookie-Ikamva eliNcinci Umthengi okhulayo ngasese ngoku uyala i-cookie yomntu wesithathu, ngengxelo ka-2018 etyhila iipesenti ezingama-64 zekuki ziyaliwe.
NgoLwesibini, Oktobha 13, 2020 NgoLwesibini, Oktobha 13, 2020 UTim Beveridge
Ukhuseleko lweBrand luyinto efunekayo kubathengisi ukuqhubela phambili kule meko yezopolitiko kunye nezoqoqosho kwaye kungenza umahluko wokuhlala kwishishini. Iimpawu ngoku kufuneka zitsale intengiso rhoqo kuba zivela kwiimeko ezingafanelekanga, kunye ne-99% yabathengisi abachaphazelekayo malunga neentengiso zabo ezibonakala kwindawo ekhuselekileyo. Kukho isizathu esivakalayo sokukhathazeka Izifundo zibonise iintengiso ezibonakala kufutshane nomxholo ongalunganga zikhokelela ekunciphiseni kwamaxesha e-2.8